Ebee ka etinye ego n'ime ego iji nweta uru - azịza ya
Isi > Ọ bụrụ na ị na-achọ > Ebee ka itinye ego n'ime ego iji nweta uru
Ebee ka itinye ego n'ime ego iji nweta uru
08.01.2017 · 5 · Ntinye niile maka January 2017
Ebee ka etinye ego iji nweta uru a bu nchegbu nye ndi mmadu nwere ugbua ma ndi oru ha bu ime ka ha ba uba. Enwere otutu onyinye maka ndị dị otú ahụ ma na Ịntanetị na nke offline. ọṅụ nke ọrụ a na ọnọdụ bụ a nnọọ ike nhọrọ, n'ihi na o nwere n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị na-agụ na-kacha laghachi na ulo oru mbo na ntụkwasị obi nke nzukọ, nke O nyere ya ego. Taa, anyị ga-egosi gị a ụzọ ịmụta site ha onwe ha ego-akacha uru na di ntakiri n'ihe ize ndụ, nke na nke a nwere ike na-achịkwa!
Ozugbo ọ dị mkpa ịghọta ihe ntinye ego na ajụjụ. E meghị saịtị anyị maka dollar millionaires, ha agaghị enwe ajụjụ ndị metụtara ndị nkịtị. Ya mere, ndị editọ anyị na-edozi aha maka aha mpako "ego ego ego" na 1000 dollar. Onye ọ bụla nke nwere ụdị ego ego ahụ bụ maka anyị ndị na-achụ ego na ndị ndụmọdụ anyị na-elekwasị anya na ndị dị otú ahụ.
Ya mere, olee ebe nwoke nke oge a nwere ike isi tinye ego ego ya, ego 1000 na n'elu. Onodu ogugu nke ulo oru ugbua na offline n '
ụlọ ọrụ akwụmụgwọ nke na-anabata nkwụnye ego sitere na ọha mmadụ
etinye ego n'ahịa
Ka anyị tụlee nkenke ndị a chọrọ ma gbalịa ịlele njirimara ha, dị ka ihe ebe itinye ego iji nweta uru:
Nkwụnye ego maka ego maka ego
Ka ọ dị ugbu a, nkwụnye ego nwere nnukwu uru abụọ:
nke a bụ ezigbo ego na-efu, nke ego na-eweta uru zuru oke n'enweghị òkè nke onye ahịa ahụ, ihe niile dị mkpa bụ iji nweta ego na mmalite nke ego ịkwụ ụgwọ ma chịkọta ha na njedebe oge a;
nke a pụrụ ịdabere na ya - ụlọ akụ dara ma kwupụta na ndabara adịkarịghị na ntinye ego n'ime ego ha na-enye site na ego nke ala na-akwụghachi ụgwọ nkwụnye ego;
Ndị a bụ ezigbo uru zuru oke, mana ha na-enwe mmetụta zuru ezu site na nhaghachi ego nke ụdị ego a - ntakịrị mmasị, wee si otú a nweta uru dị nta. Maka mba ọzọ ego ego, mmasị dị otú ahụ bụ ihe na-erughị 10% kwa annum, maka ego obodo na nke mba ego ndị a na ọnụ ọgụgụ dị elu, ma ha na-ezi mgbe "iri" onu oriri na ọṅụ na okè pụrụ nanị na-aga n'ime mwepu, ma ọ bụrụ na a ga nyefee ego ole i nwetara na US dollar ma ọ bụ euro.
Ụdị dị iche iche nke ọha na eze akwụmụgwọ na-enye nnukwu mmasị na nkwụnye ego karịa ụlọ akụ, mana pasent ndị a ka na-ezughị ezu iji nwee ike ikwu okwu ego dị ukwuu site na otu puku dollar. Otú ọ dị, ihe ize ndụ dị n'ihe gbasara itinye ego n'ime òtù dị iche iche dị elu karịa mgbe itinye ego na bank, na nke a, steeti anaghị ekwe nkwa nloghachi ego, ndụ nke ndị dị otú ahụ na-adabere na nloghachi nke mgbazinye ego ha. Na n'ezie, enweghi mkpuchi ọ bụla na eziokwu na ndị na-ahazi mkpọsa ndị dị otú a, ebe ha nwetara ego zuru ezu site n'aka ndị na-edebe ego, agaghị enye ndị ha "ego ha ego," bụ ndị na-agaghị alọghachite ya. Mgbe nke a gasịrị, ndị mmadụ na-ahụ maka ọha mmadụ ga-ekwupụta na ọ bụ onye nwere akụ na ụba na ihe niile ga-esi na ya apụta.
Ịkwado na ahịa ahịa
N'oge na-adịbeghị anya, ọ ghọọwo ejiji itinye ego na ahịa ahịa. Ihe Nlereanya Warren Baffita, George Soros na Donald opi na-ese ọtụtụ ka na-agbalị ịchọta onwe gị a ego nhọrọ, ma iji ọma ha akpụ, ị mkpa nwere na oge na ohere na-eduzi a ọma analysis nke ụlọ ọrụ onye mbak na-atụ anya na-azụ, ma ọ bụghị na ị nwere ike egosi ọzọ na ya na nchikota nke Ihe mmepụta dị ntakịrị karịa ntinye.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ụzọ ndị a na-ahụghị anya, ọ bụ ezie na ha na-enye nhọrọ ndị ha ga-etinye ego iji nweta uru, ma uru a ga-abụ obere, ma ọ bụ nwee njikọ dị oke egwu, ma ọ bụ n'ozuzu na-adịghị mma.
Ma ọ bụghị ihe niile dị njọ na mwute, anyị kwadebere maka ndị na - agụ akwụkwọ anyị - ndị na - etinye ego na - eme nhọrọ dị mma, nke jikọtara nnukwu ohere maka uru ma n'otu oge ahụ na - enye gị ohere ijikwa ihe ize ndụ gị. Ka anyị hụ ihe ga-enyere anyị aka ma nweta ma belata ihe ize ndụ nke isi obodo na-efu.
Akaụntụ VIP nke onye na-ere ahịa Broker - uru na-enweghị ntụpọ!
Ọnọdụ VIP n'ọnọdụ ọ bụla nke ndụ mmadụ na-egosi ndepụta ụfọdụ nke uru na ihe ùgwù. Nke a na-emetụta ọnụọgụ ego, nakwa yana ntụziaka ọhụrụ - nhọrọ ọnụọgụ abụọ. N'isiokwu a anyị ga-atụle uru ndị dị mkpa na VIP-ọnọdụ nke akaụntụ ahịa na n'elu ikpo okwu maka ịzụ ahịa ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ binomo. Na ugbu analysis, anyị kọwaa a listi azụmahịa, informational na ọtọ amụma brokerage ụlọ ọrụ maka nke a ụdị trading akaụntụ ma kọwaa ókè ha mmetụta na profitability nke trading ahịa na izugbe nkwụsi ike nke pụta ahịa sonyere na nke ha na-eme.
Ya mere, a ga-ahụrịrị ozugbo na VIP-ọnọdụ nke onye na-ere ahịa akaụntụ ahịa Binomo na-agwa ndị ahịa ka ha tinye ego isi nke 1000 USD.
N'ịtụle ọnụ ọgụgụ nnukwu ego nke nnukwu ego, ọtụtụ ndị ọhụrụ na ahịa ahịa na-agafe usoro a nke azụmahịa. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na dollar 1000 bụ ego buru ibu maka ndị ọkachamara na-arụ ọrụ ego, nakwa maka ndị na-amalite ọkwá n'ozuzu ha bụ isi ego. Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị nyochaa akaụntụ VIP nke onye na-ere ahịa site n'ọnọdụ nkasi obi nke ahia, ike ya na ihe omume ikpeazụ, mgbe ahụ, ọ bụ ọnọdụ dị elu na ọrụ nkà na ụzụ ya na ahịa nke a pụrụ ịtụle dị mma maka ndị na-amalite. Ka anyị tụlee ihe niile na-egosi na ị ga-ahụkwu. Taa, oghere maka ịmepụta akaụntụ VIP na trading platform Binomo, onye ahịa ahụ na-enweta ohere ndị dị otú ahụ:
Ụda ego nke 100% maka ịkwụ ụgwọ ego maka ndị ahịa - ya mere, na mmalite ọrụ na ahịa, onye so na-eme ka ọnụ ọgụgụ isi obodo ya dị elu. Nke a na-emepe ọtụtụ ihe ùgwù mgbe ị na-eji njikwa ego nakwa maka ị nweta nnukwu ọnụọgụ ego site na ịzụ ahịa ọnụọgụ abụọ. Onye ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ nwere ike iji ọnụ ahịa nke ego ahụ jiri ọnụ ọgụgụ dị elu karịa ọnụ ahịa ya, si otú ahụ na-abawanye uru nke ịzụ ahịa na, na mgbakwunye, ego ndị ọzọ a na-enweta dị ka ụgwọ bụ ụdị mkpuchi maka isi obodo.
Onu ogugu nke ndi oru ahia - on Akaụntụ VIP nkezi nke uru nke nkwekọrịta bụ 87%, na ụbọchị ụfọdụ ọ na-enweta 90%. Ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ nke mmiri na-ere na kọmịnta ahia na-emetụtakwa ihe ga-esi na ahia ahia
Onodu kachasị oke nke akụ ala - ihe ngosi a na-ekpughe ohere nile nke onye na-etinye ego n'ime ahia ọnụọgụ abụọ ma na-enye gị ohere itinye ego n'ahịa ego na ọkwa ọkwa. Iji ụdị dịgasị iche iche na ụdị ihe onwunwe, ọ ga-ekwe omume ịmepụta nchịkọta ego, nke ga-enweta uru kachasị elu, na ọkwa nke ihe ize ndụ ga-ebelata ihe ngosi kachasị.
Asambodo nke ego isi ego site n'aka n'ezie - onyinye nke onye ahia a na-enye gị ohere ịbawanye ego maka ịzụ ahịa na ọnọdụ kachasị nchebe maka isi ụlọ ọrụ, nke ga-eme ka njirimara nke nkwụsị ahịa kwalite.
Ojiji emebi, 10% kwa izu - nọrọ otu ọma izu ke ọnụọgụ abụọ ahịa, a ahia nwere ike inwe 10% nke ha furu efu ahia ego azụ - ọ bụ ezi nanị na-enye ọbụna n'ihi VIP-akaụntụ nwere na ọnụọgụ abụọ ahịa. Otú ọ dị, onye na-ere ahia Binomo jiri ya gosiputa usoro iwu ya
Monetization ahịa uru 4 awa - na-ikpeazụ n'ihi nke trading dị otú ahụ a obere oge nwere mmetụta ọ bụghị nanị na-arụpụta nke ahia, ma na mkpokọta psychological ala nke ahia, na ọ dị ezigbo mkpa maka ịrụsi ọrụ ike na ego akụ.
Nkwado nyocha nke onye njikwa onwe - ọrụ a nke ụlọ ọrụ maka ndị bịara ọhụrụ nke ahịa bụ ngwá ọrụ dị mkpa nke ịzụ ahịa azụ site nhọrọ ọnụọgụ abụọ. Iji ndụmọdụ ndị ọkachamara, onye na-azụ ahịa n'enweghị ahụmahụ n'ịzụ ahịa nwere ike ịnweta ma na-emekwu ihe ọmụma ọkachamara ya na-arụ ọrụ na nkwekọrịta ọnụọgụ abụọ
N'ihi ya, ihe ùgwù nke Ukwuu-akaụntụ nwere a ore, sara mbara oru ike nke na akaụntụ, dị ka nke ọma dị ka ndị ọzọ bonus na ọrụ àjà nke elu ọnọdụ na-emeghe ka novice Player na-akparaghị ókè ohere na uru ọrụ na ọnụọgụ abụọ ahịa. Na akaụntụ VIP na onye na-ere ahia Binomo Ọ bụ azịza mara mma maka ajụjụ ebe ị ga-etinye ego iji nweta ego. Karịsịa, ọ dịghị ụzọ ọzọ itinye ego ga-esi nye ohere dị otú ahụ maka inweta ego na nduzi zuru ezu. Ya mere, ọ bụ ezie na onyinye dị otú ahụ dị n'ahịa, ọ bara uru ịmalite Ozi VIP na broker Binomo ma malite ịbawanye isi obodo gị ugbu a.
Nhọrọ ọnụọgụ abụọ bụ brokers kacha mma
Ntụle bụ isi na December 30
Ihe ndị ọzọ si na ụdị "Nhọrọ ọnụọgụ abụọ"
Ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ Gịnị bụ?
Nhọrọ ọnụọgụ abụọ bụ 2 (40%) 4 ...
Nhọrọ ọnụọgụ abụọ Nhọrọ Video
Nhọrọ ọnụọgụ abụọ Nhọrọ Lessons4 (80%) 2 ...
Olee otú iji ngwa ngwa Mee Ego na ọnụọgụ abụọ Nhọrọ
Kedu ka esi eme ngwa ngwa na ...
Nhọrọ ọnụọgụ abụọ maka ndị mbụ
Ọnụọgụ ọnụọgụ nhọrọ maka beginners5 ...
Ọnụọgụ abụọ ọnụọgụ abụọ na-enweghị ịdenye aha n'ịntanetị
Ọnụọgụ abụọ nhọrọ demo akaụntụ na-enweghị ...
Mkparịta ụka: 5 kwuru
Ugboro ugboro na-eche ebe ị ga-etinye ego iji nweta uru. E nwere ahụmahụ na ụlọ akụ na ụlọ ọrụ n'aka, ma onu oriri "riri" ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ego niile e nwetara. Enweghị m ahụmịhe n'ahịa nke ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ, ma enwere m mmasị maka ozi gbasara ohere na uru ndị akaụntụ VIP na-enye. N'ọnọdụ ọ bụla, m ga-enweta ihe ọmụma na nkà iji nwaa m ahịa ọhụrụ.
Na-akpacha anya mgbe niile ma zere ụdị nrịba ama niile iji tinye ego iji nweta ego. Ekweghị m na mmebi iwu nke ụlọ akụ, ana m enyo maka ahịa ahịa. Ọ bụ ezie na nhọrọ ahụ na mmalite nke akaụntụ pụrụ iche na onye na-ere ahịa ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ bụ ihe na-adọrọ adọrọ. M ga-atụgharị uche ma gwa ndị nwere ahụmahụ.
Ee, nsogbu ebighi ebi bụ ego na ebee ka etinye ha? Dị ka m chere, ụlọ akụ ahụ nwere ntụkwasị obi karị.
Kwesiri nke oma ma dee ihe na otu esi eme. Daalụ maka ozi bara uru, m ga-anọ ebe ahụ.
Daalụ maka ozi bara uru ma na-adọrọ mmasị. Onye ọ bụla chọrọ ịchọrọ onwe ya na onye na-eme nke ọma, na-achọpụta n'oge na-adịghị anya na ego ọ bụla, ma ọ bụ nnukwu ma ọ bụ obere, kwesịrị ịrụ ọrụ /
Honda Motor na Dongfeng Motor Group ga-ewu otu ụlọ osisi na China
Ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na-akọwa n'ezie site na ndị mbido